प्रेमिका भेट्न मध्यरातमा पुगेका विकासको रहस्यमय मृत्यु ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
प्रेमिका भेट्न मध्यरातमा पुगेका विकासको रहस्यमय मृत्यु !
२७ साउन, काठमाडौं । ‘भोगाई सबैका अमूल्य हुन्छन् । कसैले लेख्छन् -‘कथा’ हुन्छ । कसैले लेख्दैनन्– ‘व्यथा’ हुन्छ !’ सिन्धुलीको दुम्जा–५ स्थायी घर भएका विकास कोइरालाले साउन २५ गते आफ्नो फेसवुकमा यस्तो स्ट्याटस लेखेका थिए । भोलिपल्ट अर्थात ०७३ साउन २६ गते विहान उनी आफ्नी प्रेमिका सीमा चेम्जोङ सुब्बाको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
काठमाडौंको मध्य बानेश्वरको भेनस हस्पिटल नजिकै रहेको सीमाको कोठामा पासो लागेको भनिएको सल काटिएको अवस्थामा विकासको शव प्रहरीले फेला पारेको थियो । बुधवार बिहान साढे १० बजे विकासले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको खबर पाएसँगै सीमाको कोठामा प्रहरी पुगेको थियो ।
‘हामीले सल काटीसकेको अवस्थामा विकासलाई फेला पारेका थियौं, हाम्रो टोली पुग्दा उनको मृत्यु भैसकेको थियो’ महानगरीय प्रहरी वृत बानेश्वरका ईन्स्पेक्टर अभय जोशीले भने, ‘हत्या या आत्महत्या छुट्याउन पोष्टमार्टमको रिपोर्ट नआई भन्न सकिँदैन ।’ सिन्धुलीको दुम्जा–५ रुपटारका कोईराला ललितपुरको जावलाखेलमा रहेको टुलिप रेष्टुरेण्टमा काम गर्थे ।
कालोपुलमा भाईसँग बस्दै आएका उनी सीमाले बोलाएपछि मंगलबार राती ११ बजेतिर सीमाको कोठामा पुगेका थिए । कोठामा सीमा सहित उनका अरु दुई जना बहिनीहरु सँगै बस्थे । सामान्य विवाद भएपछि कालोपुल जान्छु भन्दै उनी निस्केका थिए । विहान सीमाको एउटी बहिनी कलेज जान लाग्दा विकास ढोका बहिरै भेटिएको सीमाले प्रहरीलाई बताएकी छिन् ।
त्यसपछि फेरि कोठामा पसेका विकासले सीमालाई ‘तिमीले खोजेको कुरा आज पाउँदै छौं’ भनेका थिए । सीमा र उनको अर्की बहिनी नित्यकर्म सक्नतिर लाग्दा विकास फ्यानको हुकमा सल बाँधेर झुण्डिएको देखेपछि आफूले कैंचीले सल काटिदिएको सीमाको भनाई उदृत गर्दै परिवारले जनाएका छन् । #रातोपाटीबाट साभार